अगस्ट 6, 2018 अगस्ट 6, 2018 साइन्स इन्फोटेक	4 Comments डा. राम बहादुर बोहरा
बोलीचालीको भाषामा ‘ग्यास्ट्रिक’ भनिने ‘ग्यास्ट्राइटिस’लाई आमनेपालीको रोग मानिन्छ। कतिपयले ब्यंग्य गर्दै यसलाई नेपालीको राष्ट्रिय रोग समेत भन्ने गर्छन्। पहिले–पहिले ४० वर्षभन्दा माथिको उमेरमा देखिने ग्यास्ट्रिक हिजोआज जुनसुकै उमेर समूहका मानिसमा पनि देखिन थालेको छ।
पेट दुख्ने, पेट फुल्ने, केही चिज खाएपछि अमिलो डकार आउने या छातीको बीचतिर दुख्ने जस्ता समस्या देखिनासाथ हामी ग्यास्ट्रिक भयो भन्छौं । अनि डाइजिन, पेन्टाप्राजोल या अन्य एन्टासिड चक्की खाइहाल्छौं । तर, सबै पेट दुखाइ ग्यास्ट्रिक नहुन पनि सक्छ।
९. कोक, फ्यान्टा जस्ता कोल्डड्रिक्स ।
भनिन्छ रोग लाग्नुभन्दा रोगनै नलागोस भन्ने कुरामा ध्यान पुराउन सके आधा रोग त्यसै नीको हुनसक्छ । उपरोक्त खानपिनमा ध्यान दिनु नै सफल उपचार मानीएको छ । ग्यास्ट्रिको उपचार औषधि मात्र होइन खानामा सत्रक्ता अपनाउन सके आफै नीको पनि हुन सक्छ ।
१) अभिपत्तिकर चूर्ण १ चमच दिन्मा २ पटक नियमित खाने ।
२) पेट सफा राख्न त्रिफला चूर्ण राती दूध संग १ चमच खाने ।
३) प्रात उठ्ने बित्तिकै ३,४ गीलास पानी पीउने । २ घण्टा सम्म खाना केहि नखाने ।
४) पानी पिएको २ घण्टा पछि एक गीलास मनतातो पानीमा एक चुट्की बिरेनुन राखेर पानी पीउने ।
५) हल्का व्याम गर्ने
← खोकी र यसको उपचार
कसरी हुन्छ युरिक एसिड ? →
मार्च 3, 2019 साइन्स इन्फोटेक 12
नोभेम्बर 2, 2018 साइन्स इन्फोटेक 8
4 thoughts on “ग्यास्ट्रिक र यसको उपचार”
Pingback:पायल्स र यसको सफल उपचार